Hoggaaminta jumlada iftiinka qurxinta, nalalka horseed u ah qurxinta guriga | Huayi Iftiin
Guriga > Alaabta > Iftiinka Qurxinta
Nalalka qurxinta LED, Sababtoo ah midabada hodanka ah, waarta iyo tamarta-badbaadinta, waxay aad ugu habboon yihiin ujeedooyinka qurxinta. Nalalkayada qurxinta ayaa kala duwan oo ay ku jiraanqaabka warshadaha iftiinka, iftiinka qaabka casriga ah
Iftiin la habeeyey, Ku rakib nalalka qurxinta LED ee looxyada wareegga, fiilooyinka dabacsan, ama walxo kale. Fikradaha qurxinta nalalka LED-yada waxaa loo isticmaali karaa sida nalalka qurxinta LED ee qolka jiifka, nalalka xarfaha, looxyada calaamadaha, nalalka raadadka, tuubooyinka, iwm.
Iftiinka qurxinta ee LED waa iftiimin gudaha ah waxayna la mid tahay dahabka guriga: waxay kaa caawinaysaa booskaaga dhalaalid iyo dhalaal. Soo gal gurigaaga oo soo saar sifooyinkiisa ugu wanagsan adiga oo ku daraya nalalka qurxinta ee LED. Nalalka LED-ka ee qurxinta qolka ma aha oo kaliya loo isticmaalo iftiinka dhawaaqa, laakiin sidoo kale quruxda.
Huayi Lighting waa soo saaraha nalalka qurxinta ee LED ee xirfadleyda ah, oo ku takhasusay soo saarista nalalka qurxinta gudaha. Waxaan leenahay koox xirfad leh oo karti leh, fikradaha qurxinta nalalka LED gaar ah, waxaanan siinaa macaamiisha noocyo kala duwan oo nalalka qurxinta LED ah.
Crystal Chandelier la habeeyey
Lambabka Miis ee Xirfadlaha ah
Laambada Dabaqadda Geeska ee LED
Laambada Dabaqa LED
3 kontaroolaha beddelka, badhanka Dimmer,355 darajo iftiin wareeg ah,3000K-6000K heerkulka midabka.
Soo saaraha Qurxinta Miiska Lamp
Laambada miiska qurxinta ee guriga / hoteelkaMidabka: Dahab/Chrome
Wareega Birta Casriga ah ee Chandelier
Saxanka sare ee nuugista Harware,Silig ka joojinta,Jidhka aluminiumka,Isha iftiinka LED-ku-dhisantahay
Kastamka aan caadiga ahayn
Hardware Wall Lamp